Mpanamboatra sy mpamatsy milina fanapahana | China Machine fanapahana milina
Tape Velcro mandeha ho azy Mahitsy Boribory Cutter MAX-52CS
Fampiharana mety amin'ny Velcro, kasety Velcro, kofehy nylon, kofehy, tarika elastika. Toetra mampiavaka 1.Suit ho an'ny fanapahana lable, kofehy, fehikibo; 2.Zipera sy tady isan-karazany amin'ny habeny raikitra; 3.Tsy mahitsy, antsy boribory misafidy. Parameter teknika modely Voltage fanapahana antsy isan-karazany ny halavany manapaka O 'ty / min (halavany: 50mm) haben'ny fonosana (mm) NW / GW (KG) MAX-52C AC110 / 220V (50-60Hz) Antsy mangatsiaka 5-999.9mm 70 -90cuts 545X385X335 23/25 MAX-52R AC110 / 220V (50-60Hz) Hot ...
Fanaraha-maso ny faran'ny lamba elektrika MAX-980D
Fampiharana Mety amin'ny landihazo, landy, rongony, knitting, hoditra sentetika, karipetra, lamba famaohana, sarimihetsika plastika. Mampiavaka 1. Fanisana elektronika marina, fampirantiana dizitaly; 2.Auto-miverina, fahatsiarovana fahatapahana ary fiasa fametrahana isa. Modely Parameter teknika: MAX-980D Valtage: 220V (50-60Hz) Herinaratra: 180W Fanapahana malalaka: 1.5 ~ 2.8M Halavan'ny axis torolàlana: 1.8 ~ 3.0M Hafainganam-pandrefesana: 7m / s Haingam-pandeha: 16000r / min Haben'ny entana: 765X460X200 mm) NW / GW: 13/14
Cutter farany fanapahana lamba nomerika MAX-980-QD
Fampiharana Mety amin'ny landihazo, landy, rongony, knitting, hoditra sentetika, karipetra, lamba famaohana, sarimihetsika plastika. Toetra mampiavaka ny rafitra rafitra fanaraha-maso nomerika feno-auto; Fampisehoana 2.LCD, mora apetraka; 3.Auto go-and-back, auto lift, fahatapahana fahatsiarovana fahatapahana ary ny fametrahana ny numaber; 4.980-QD-1 nohatsaraina, amin'ny alàlan'ny fanondranana visy. Modely Parameter teknika: MAX-980-QD Manapaka malalaka: 1.5 ~ 2.8M Halavan'ny famaky ny torolàlana: 1.8 ~ 3.0M Hafainganam-pandrefesana: 7m / s Valtage: 220V (50-60Hz) Herinaratra: 180W NW / GW: 23/25 Mihodina hafainganana : 16000r / min Fonosana ...
Masinina manapaka antsy amin'ny bandy MAX-900A / B
Toetra mampiavaka 1. ampiasaina amin'ny indostrian'ny akanjo; 2.Fanapahana mialoha; 3.Air cushion fitaovana tsy dia mahazaka fanoherana; 4. "B" karazana amin'ny inverter, haingam-pandeha azo ovaina; Parameter teknika Model Voltage Motor Air blower famaritana latabatra Cutting snan Knife size size fonosana (mm) NW / GW (KG) MAX-550A / B 220/380 1P750 3P550 / 550 370 1000X1200 90mm 550mm 0.45X10X3100 1410X860X1780 190/255 MAX- 700A / B 220/380 1P750 3P550 / 550 370 1200X1 ...